China Cut-to-Size ọrụ ụlọ ọrụ na ndị na-ebu ngwaahịa | Donghua
DHUA na-enye akwa eji eme akwa di elu nke di elu na onu ahia. Anyị na-ebipụ acrylic, polycarbonate, PETG, Polystyrene, na ọtụtụ mpempe akwụkwọ. Ihe mgbaru ọsọ anyị bụ inyere gị aka belata mkpofu na ịchekwa na ala akara nke ọ bụla acrylic ma ọ bụ plastik n'ichepụta oru ngo.
Ngwa mpempe akwụkwọ gụnyere ihe ndị a:
• Extruded ma ọ bụ Nkedo acrylic
• Ma karia - Biko juo ase
Pakwụkwọ ikpeazụ Cut to Size na Ọrụ ricgha
DHUA na-enye ọtụtụ nhọrọ ihe mpempe akwụkwọ thermoplastic dị iche iche na ọnọdụ nke ọfụma nka maka mkpa gị niile. Ihe mgbaru ọsọ anyị bụ inyere gị aka belata mkpofu na ịchekwa na ala akara nke ọ bụla acrylic ma ọ bụ plastik n'ichepụta oru ngo.
Anyị na-enye ọrụ dị oke nkenke na-egbu egbu na CNC na akụrụngwa laser. Anyị nwere ike bee & kanye gị chọrọ image, slogan, logo, quote, wdg n'ime ihe ọ bụla size, udi, na ịke ị masịrị. Site na mpempe akwụkwọ dị mfe na mgbagwoju anya na ịdebanye aha, otu mpempe ma ọ bụ usoro mmepụta - a na-eme ya niile site na iji ngwa ngwa anyị.
Laser tingcha & Ọrụ CNC
Laser ọnwụ: Ọ dị mma maka geometrically dị mfe yana ihe dị mgbagwoju anya nke nwere ike ịgba na oke nkọwa ziri ezi. N'ọnọdụ nke laser ịkpụ plastik ihe nwere kenkowaputa imecha - laser ịkpụ acrylic ma ọ bụ omenala ịkpụ plexiglass, dịka ọmụmaatụ. Ọ nwere mgbanwe dị elu ma nwee ike ijikwa ọrụ na ọkwa ọ bụla dị mgbagwoju anya. Igwe ọnwụ laser na-ahapụ mmetụta dị egwu na nsọtụ ihe dịka acrylic.
CNC ọnwụ: Ọ bụ ezigbo maka geometrically dị mfe yana mgbagwoju anya ihe nke nwere ike milled na oké zuru ezu ziri ezi. Enweghị igwe ma ọ bụ ihe osise ọzọ na-arụ ọrụ nke ọma na ihe siri ike karịa CNC. Site na igwe ọnwụ CNC, ngwaahịa achọrọ nwere ike ịdị nha anya, kee ya ma mepụta ya na imepụta ihe pụrụ iche.
Omenala tingcha na osise (Laser na CNC tingcha)
Nkenke tingcha: akụkụ, Bandsaw Cuts, ihe nakawa etu esi, Circle Cuts
Nkenke Oghere Drilling, Countersink, na ịme ọpịpị
Okpomọkụ na-agba agba
Printing na Acryli ma ọ bụ ndị ọzọ Plastic Ibé akwụkwọ
Gha & Mgbakọ
Ngwaahịa & Injinia
Mpempe akwụkwọ Mpempe Akwụkwọ ma ọ bụ Mpempe akwụkwọ Ndị ọzọ
Ihe osise ma ọ bụ ihe osise
Ihe na ọkpụrụkpụ
AI faịlụ ma ọ bụ PDF maka ọrụ ịkụcha laser
Ntuziaka anyị chọrọ:
Akwa Ogo Plastics, Omenala Ejiri. Rịọ A Quote Taa! Anyị dị njikere iji chepụta & Mepụta Ihe Need Chọrọ Maka Projectlọ Ọrụ Gị.
Acryli Ogige Mirror Cut To Size
Acryli Mirror Bee Iji Size
Acryli Mirror mpempe akwụkwọ Cut To Size
Bee ka nha acryli mirror
Cha acryli Mirror
Ewute acryli mpempe akwụkwọ N'ihi Laser tingcha
Laser Cut Mirror acryli
Mirror Acryli Sheet Cut To Size